Izincwadi zikaBenjamin Black
Izivakashi Eziyimfihlo, zikaBenjamin Black
Igama eliMnyama njengengxenye mbumbulu ukumenyezelwa kwenhloso. Kulokhu uJohn Banville ngobuciko bakhe obuchichimayo ubebheke kakhulu kumanoveli azo zonke izinhlobo. Endabeni yale noveli, uphawu olumnyama njengokuhlangana okulula nohlobo olumnyama ku ...
Izimpisi zasePrague, nguBenjamin Black
Ukwehlukaniswa okujwayelekile phakathi kukaJohn Banville negama lakhe okungelona elakhe uBenjamin Black kuza nale noveli kuhlobo lokuhlanganiswa nomsebenzi, ngaphansi kwesiginesha yamagama akhe, okunikeza ukufundwa okuphindwe kabili kwenganekwane yomlando noma i-noir. Ngakho-ke, umbhali wase-Ireland ufingqa lo mugqa wesakhiwo esiphindwe kabili ...
IShadows of Quirke, nguBenjamin Black
UQuirke wayengumlingiswa owayesuka kumanoveli kaJohn Banville waya kuthelevishini yonkana i-UK. Ukunqoba okumangalisayo okuyimfihlo yakhe ukuhlonipha ukulungiselelwa okuyingqayizivele lo mbhali, ngaphansi kwegama elingumbombayi uBenjamin Black, abelokhu enikeza abafundi bakhe iminyaka. Konke…